Tanzania : Narahin-dranomaso ny Eid · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2008 22:15 GMT
Inona no eritreretr'ireo mpitoraka blaogy Swahili avy ao Tanzania manoloana ny loza nitranga tamin'ny fankalazana ny Eid Al Fitr ? Olona 20 mantsy no maty tamin'ny fankalazana ny Eid Al Fitre tao amin'ny toeram-pikoranana natokana ho an'ny tanora ao Tabora, afovoan'i Tanzania. Raha ny tombatombana dia tanora 7 ka hatramin'ny 18 taona miisa 400 be izao no nivory tamin'io lanonana io raha ny antsasak'izay no tokony ho zakan'ny trano.
“Ny lehibe indrindra eo amin'ny tantaran'i Tanzania” sy “ny loza ratsy indrindra nitranga tamin'ny Eid al-Fitr” no nilazan'ny mpanao gazety iny loza iny.
Naato noho ny fanadihadiana moa ny mpikarakara ity toeram-pikoranana natokana ho an'ny tanora, malaza amin'ny anarana hoe “Toto disco” ity.
Hita an-tsary ao amin'ny Faustine's Baraza sy Issa Michuzi ilay toeram-pikoranana sy ny nofo mangatsiakan'ireo tanora.
Nanentana ny olona hitandrina bebe kokoa amin'ny lafiny ara-pahasalamana ny mpamaky :
‘NDEHA HATAONTSIKA LAHARAM-PAHAMEHANA NY FAHASALAMANA REHEFA MANAO ZAVATRA. TSY ILAINA MIHITSY ARY AZO NIALANA INY FAHAFATESANA INY. TSY HAIKO NA RAHOVIANA ISIKA VAO MBA HIANATRA !!
Hoy kosa ny mpamaky sasany :
Tokony mandehana maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianankaviana ny filoha Jakaya, indrindra izy mamangy ireo olo-malaza matetika rehefa misy loza mahazo azy ireo. Tsy ny minisitra Kapuya [Minisitry ny Asa sy ny Fampandrosoana ny Tanora ao Tanzania] no tokony irahina amin'ny zava-dehibe tahaka izao.
Tokony mandeha any amin'ny toerana nitrangan'ny loza izy, manao ny fanadihadiana ary mitatitra amin'ny vahoaka. Fotoana koa angamba izao mba hanaovan'ireo [fire marshals] fandihadiana amin'ny isan'ny olona tokony ho zakan'ireny toeram-pikoranana ireny sy ny fivoahana raha misy loza tahaka izao. Isan'izany ny fananana milina mamokatra herin'aratra sy olona antsoina raha misy vonjy taitra.
Araka ny voalazan'i Msimbe ao amin'ny Lukwangule Entertainment dia olona roa, ankoatra ireo mpikarakara, no efa nahato sy hadihadiana amin'izao, dia ny mpitantana ny One Ten Disco sy ny Bubbles Night Club
Voalaza ao amin'ny lahatsoratra iray amin'ireo lahatsoratra maro ao amin'ny Issa Michuzi mikasika ity loza ity fa nampanao fanadihadiana mikasika ny nahatonga ity voina nahafaty olona maro ity ny filoham-pirenena tanzaniana.
Efa nanangana sampana hiandraikitra ny fanadihadiana ny manam-pahefana any any Tabora. Araka ny hevitry ny mpamaky sasany dia isan'ny antony nahatonga ny loza ny manam-pahefana any an-toerana ary izy ireo no melohiny voalohany indrindra :
Aiza ny toerana natao hialana voly eto Tabora ? Misy toerana natokana ho an'ny ankizy ve, ahitana savily, na dia iray aza eto Tabora ? Iza no diso ? Tsy tahaka ny fatadiavana mpanosavy akory, na hifanitso-keloka. Ny tsy fahaiza-mitondra avy amin'ny fitondram-panjakana isan-tsokajiny no mahatonga izao. Rehefa maty ny zanatsika vao miseho fa tena miraharaha tokoa ny mpitondra, tena mpanakanto mihitsy ! Mampalahelo ! Raha nisy toerana hilalaovan'ny ankizy, ankizy iza no handao ny savily ka handeha ho any amin'ny toeram-pikoranana ? Be politika loatra ! Mirentireny ery amin'ny Doctorat nefa tsy manao na inona na inona akory ! Ahantona amin'ny rindrina fotsiny ?
Raha fiaraha-miory no nentin'ireo mpamaky ho an'ny fianankavian'ireo nodimandry, dia tsikera kosa no azon'ny mpitondra fanjakana any an-toerana :
Maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianankaviana voakasika mivantana amin'izao sy ny mponina eto Tabora. Rahoviana isika vao hianatra ?
1. An'arivony ny olona maty noho ny loza isan-karazany, fa tsy mbola matotra ihany ny fandraisan'ny fitondram-panjakana azy. Inona no nataon'ny chang'ombe, na Kisutu na Muhimbili Reports mba hampihena ny loza tahaka izao ?
2. Na hanangana sampana 100 aza isika dia tsy hampihena ny isan'ny maty izany satria tsy ataontsika matotra ary tsy rarahintsika ny ain'ny olon-tsotra.
3. Raha tsy mahazo mandeha any amin'ireny toeram-pikoranana ireny ny ankizy, tsy hitan'ny manam-pahefana eto Tabora ve izany ?
4. Raha mahazo mandeha any izy ireo, manaraka fepetra isan-karazany, dia tompon'andraikitra feno ny NSSF (tompon'ny trano), ny tompon'ny toerana nanaovana ny lanonana (ny mpampiantrano) ary ny ao amin'ny firaisana (mpanara-maso).
Ampatsiahivo ny mpitondra antsika, ry tanzaniana any an-toerana, ny andraikitr'izy ireo. Ho an'ny mpahay lalana : ampio ireo tra-boina mba hahazo onitra araka ny rariny izy ireo ary tokony ho lesona ho an'ny hafa izao.
Tantaran'ny Tanora farany